भारतले बनाएको बाँध फुट्यो, १५० भन्दा धेरैको मृत्यु ! [मुटु कमाउने भिडियो हेर्नुहोस] – NepalajaMedia
February 8, 2021 660
काठमाडौं । एक हिमताल फुट्दा भारतको उत्तराखण्ड राज्यमा सयौं ब्यक्ति बेपत्ता भएका छन् । हिमताल फुटेपछि आएको बाढीले बाँध फुट्दा कम्तीमा १५० ब्यक्ति बेपत्ता भएको जनाइएको छ ।
उत्तराखण्डको चमोली जिल्ला भएर बग्ने धौलीगंगा नदीमा बाढी आएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । ऋषिगंगा जनविद्युत आयोजनाको डयाममा कार्यरत करिब ५० जना ब्यक्ति बेपत्ता भएको उत्तराखण्डका प्रहरी प्रमुख अशोककुमारले बीबीसीसँगको कुराकानीमा जानकारी गराउनुभएको छ ।
उक्त क्षेत्रबाट केही कामदारलाई उद्धार गरिएको उहाँले बताउनुभयो । चमोलीदेखि हरिद्वारसम्मका नदी तटीय क्षेत्रका गाउँबाट सर्वसाधारण खाली गराइएको छ । चमोली जिल्लामा उद्धारकर्मी तथा सेना परिचालन गरिएको छ । अधिकारीहरुले बाढी गएको क्षेत्र वरिपरिका ग्रामीण इलाका खाली गराएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा साझा गरिएको भिडियोमा बाढीले ठूलो क्षति पुर्याइएको देखिएको छ । बाढी प्रभाबित क्षेत्रका एक ग्रामीण संजयसिंह रानाले रोयर्टससँगको कुराकानीमा बाढी तीब्र वेगले आएको र सचेत गराउने समय पनि नपाएको बताउनुभयो ।
Prevविश्वविख्यात वैज्ञानिक हकिंगले तोकिदिए पृथ्वीको आयु, अब ६ सय बर्ष मात्र बाँकी !
Nextलगातार बढेको सुनको मुल्य फेरी घट्यो
महिलाको विवाहपछि किन घट्दैन पेट ?यस्तो छ कारण जो सुन्दा सबै चकित